PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-09-30 - Usenkingeni umculi wegqom
Usenkingeni umculi wegqom
SEKUVELE ezithi ulengela engcupheni yokubhekana nengalo yomthetho umculi ongenise ngegiya eliphezulu emculweni, UTDK Macassette, osedume ngelegqom Barbie.
Lo mculi ( osesithombeni), osanda kukhipha ingoma edlalwa kakhulu emisakazweni kulezi zinsuku esihloko sithi “Domoroza”, kuthiwa usezidalele amazinyo abusheshelezi enkampanini asayine ngaphansi kwayo i-universal Music.
Ngokuthola KWELANGA LangeSonto komunye wemithombo yalo, ugqom Barbie, ogamalakhe langempela nguthandeka Mkhwanazi, usolwa ngokungayazisi le nkampani ngokuqashwa kwakhe kweminye imicimbi asuke enandisa kuyona.
Lo mthombo uthi ngokomthetho uma kunenkampani noma umuntu ofuna ukuqasha lo mculi ukuba ayonandisa, kumele aqashwe kule nkampani. Uthi inkontileka kagqom Barbie ayimvumeli ukuba emukele ukuqashwa ngaphandle kokwazisa le nkampani.
“Kunemicimbi anandise kuyona ngaphandle kokwazisa i-universal, kanti izikhulu azisagculisekile ngaye. Kungenzeka kube nezinyathelo abamthathela zona ngalokhu kodwa akukacaci njengoba izikhulu zisazohlangana ngalolu daba,” kusho umthombo.
Isikhulu esiphezulu sale nkampani, umnu Sipho Dlamini, sithe ngeke si- kwazi ukuphawula mayelana nokuthi kukhona yini abangagculisekile ngakho ngogqom Barbie. Kodwa uthe akukho ezinhlelweni zabo ukuthathela umculi wabo izinyathelo zomthetho.
“Uma kukhona okungasiphathi kahle okwenziwa wumculi wethu singahlala naye phansi sibonisane,” esho.
Ethintwa ugqom Barbie, uqale wethuka ebuzwa ngalolu daba. Unxuse ukuba intatheli ibuye imthinte ngoba usadidekile. Ngokuhamba kwesikhathi esethintwa ube esenxusa ukuba yonke imibuzo iphonswe e-universal, ngoba ngeke akwazi ukuphendula lutho.
Ugqom Barbie ungomunye wabaculi besifazane abangenisayo emculweni we-gqom kanti uke waba sematheni phambilini ngokubanga ingoma esihloko sithi “Nayi Le Walk” nodj Maphorisa.